အရေးပေါ်အိတ်ဆောင်သတ္တုမော်တော်ကားနှင်းရေမှုတ်များ - တရုတ် Richina
Basic Info Model No.: H205 Head Material: Aluminium Alloy Specification: Small Application: Garden Shovel, Snow Shovel, Farming Shovel Handle Material: Plastic Shape: Sharp Spade Function: Multifunctional Folded: Unfolded Attachment: Attachment Customized: Customized Color: Other Overall Length: 70cm Logo: Acceptable Head Size: 20.5*26cm Additional Info Packaging: 12pcs/ctn Productivity: 300000pcs per mont...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H205
: ပစ္စည်းကိုကိုင်တွယ် ပလတ်စတစ်
ယေဘုယျအား Length: 70cm
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: 20.5 * 26cm
HS Code ကို: 82010909090
အလင်းကိုအလေးချိန်အားကစား Utility ကို ကားနှင်းရေမှုတ်များ ,
ဒီကား နှင်းရေမှုတ်များ anodized လူမီနီယမ်သို့မဟုတ်အမှုန့် wih ဓါး, အရွယ်အစား coated: * 26cm 20.5,
ခြုံငုံအရှည် 70cm, Comforatble ကို T-ပုံသဏ္ဍာန်ချုပ်ကိုင်ထား,
ဘက်စုံသုံးနှင်းရေမှုတ်များ သင့်ကားများအတွက်, ထရပ်ကား။
စံပြမော်တော်ကားနှင်းရေမှုတ်များ Walmart ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်အားကစား Utility ကိုကားနှင်းရေမှုတ်များရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးတရုတ်မူလအစစက်ရုံများမှာ အသေးစားနှင်းရေမှုတ်များ ကားအဘို့။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
Alu Tube နှင်းရေမှုတ်များ
နှင်းတွန်းထုတ်တဲ့ Push ဌလယ်ထွန်ခြင်းကို angle
နှင်းရေမှုတ်များ / Pusher
Wide နှင်းရေမှုတ်များ Pushers
မော်တော်ကားများနှင့် Truck ကားများအတွက်လူမီနီယမ်နှင်းရေမှုတ်များ
ပလတ်စတစ် Blade ကိုနှင့်အတူပွင့်လင်းနှင်း Pusher ရေမှုတ်များ
စော Blade ကိုနှင့်အတူအရေးပေါ်လူမီနီယမ်နှင်းရေမှုတ်များ